Iyi vhidhiyo chaiyo yeAirPods 3? Kwete, ndezvekunyepa | Ndinobva mac
Iyi vhidhiyo chaiyo yeAirPods 3? Kwete ndezvekunyepa
Pave nemavhiki mashoma kana kuti zvirinani mwedzi isu tanga tichitaura nezve zvingangoita kusvika kwevamwe nyowani-yechitatu-chizvarwa AirPods iyo yatinodaidza kuti AirPods kutenderedza pano 3. Mupfungwa iyi zvinopfuura chokwadi chekuti Apple ichatanga chizvarwa chitsva chemakutu anozivikanwa uye makuru munguva pfupi, asi izvo zvinoonekwa muvhidhiyo yatinogovana pano hazvisi.
Uye ndezvekuti chero chikonzero chakanakira kuvhura vhidhiyo mune mamwe anofungidzirwa kuti maApple mahedhifoni anoonekwa uye achisimbisa kuti achave akadaro. Akaverengeka apfuura akashandura uye akati wandei kudonha zvinoratidza izvo zvinogona kuitika mahedhifoni uye mumwe munhu anouya nepfungwa yekutangisa vanyengeri vadzo uye voti ivo Apple ...
Kare izvi tweet yakaburitswa paakaundi yemushandisi Duan Rui kune imwe zvakare inoratidza aya enhema AirPods 3. Unogona kuenda wakananga muprofile yako wozviona.
AirPods 3 zvigadzirwa zvekunyepedzera. pic.twitter.com/QGGtGti3pB
Kunyangwe vaongorori vechimiro cheMing-Chi Kuo, vakayambira mavhiki mashoma apfuura nezve kuuya kweaya maAirPod matsva ane fomu chinhu uye dhizaini zvakanyatsofanana neiyo AirPods Pro ikozvino asi nekumwe kupesana mukati nekunze kweasilicone rubbers muchikamu chekupedzisira. Ndosaka tiri kuona izvi zvinonzi ndezvokunyepedzera Apple mahedhifoni izvozvi.
Izvo zvinokwanisika kuti ivo vanopedzisira vaine ichi dhizaini kana chakafanana neicho chatinoona mumavhidhiyo eiyi account yeTwitter, asi isu tinogona kusimbisa kuti havazi ivo vekutanga veApple. Icho chokwadi ndechekuti kana izvo zvekutanga zvaburitswa tichavawo nemaChinese makopi, sezvazviri nezvose zvigadzirwa zvinogadzirwa kubva kuCupertino.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » apuro » Noticias » Iyi vhidhiyo chaiyo yeAirPods 3? Kwete ndezvekunyepa
MacOS Big Sur 7 beta 11.3 yevagadziri